साम्राज्ञी भन्छिन्ः मैले साँचो बोलेकी छु, भुवन केसीले १० करोडको मुद्दा हाले पनि डराएकी छैन – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/साम्राज्ञी भन्छिन्ः मैले साँचो बोलेकी छु, भुवन केसीले १० करोडको मुद्दा हाले पनि डराएकी छैन
मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘आफू काम गर्न जाने ठाउँमा सहज वातावरण होस् भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ। मलाई भने डेब्यु फिल्मको सेटमै निर्मातामध्ये एक भुवन केसीले गर्ने व्यवहारले असहज बनाएको थियो। आफूले भोगेका दुर्व्यवहार र असहज परिस्थितिबारे बोलेर मैले गल्ती गरेकी छैन, १० करोडकै मुद्दा दिनुभएको छ। तर म डराउँदिनँ।’
केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल ‘इन्स्टाग्राम’ मा भिडिओ पोस्ट गर्दै उनले आफूले काम गरेका आठ फिल्ममध्ये तीन वटामा नराम्रो अनुभव भोग्नुपरेको बताएकी थिइन्।
आफूमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटना बाहिर नल्याउन पटक-पटक दबाव आउनुका साथै ‘घटना सार्वजनिक गरे फिल्मी करिअर नै खत्तम पार्दिने’ डरसमेत देखाइएको उनले भिडिओमा भनेकी थिइन्।
‘मैले १७ वर्षको उमेरमै चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेँ। त्यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र सानो भएकाले सबै कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन भनियो,’ उनले भिडिओमा भनेकी थिइन्, ‘यहाँ जसको शक्ति छ, उसैले यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ। यस्तो बेला म भर्खर चलचित्रमा आएको मान्छेले यो कुरा बाहिर ल्याउँदा मेरो लागि ढोका बन्द हुन्छ भनेर सम्झाउँथे।’
‘अंकलजस्तो उमेरको मान्छेलाई त्यही भनेर सम्बोधन गर्दा दाइ भनेर बोलाऊ भन्थे,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘कामको विषयमा केही कुरा गर्नुपरे गालामा टाँसिएर बोल्न आउँथे। त्यो कुरा अलि पर बसेर भन्न सकिँदैन थियो र?’
यसको जवाफ भुवन केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै दिएका थिए। पछि भने उनी ‘बेइज्जत गरेको’ भन्दै क्षतिपूर्ति मागसहितको मुद्दा लिएर अदालत गएका हुन्।
साम्राज्ञीको डेब्यू फिल्म ‘ड्रिम्स’ हो जसका निर्मातामध्ये एक थिए भुवन केसी।
ड्रिम्स फिल्मको निर्माण सन्दर्भमा भुवन केसी र निर्माता रवि बस्नेतको भेट भइरहन्थ्यो। एक दिन रविको घरमा उनीहरूको बैठक चलिरहेको थियो। फिल्मको काम, कलाकारका फोटादेखि डकुमेन्ट बनाउने काम सबै रविकै ल्यापटपमा हुन्थ्यो। अभिनेत्री खोजिरहेका बेला फोटा हेर्ने क्रममा ल्यापटपमा साम्राज्ञीको फोटो आयो।
अनमोलले ‘यो को हो’ भनेर सोधे। रविले भने- आफन्त, भान्जी पर्छिन्।
त्यसपछि सुरूमा अनमोलले नै भने, ‘हाम्रो फिल्मका लागि यो केटी ठीक हुन्थ्यो।’
त्यसमै भुवनले थपे, ‘ओहो यो कति क्युट केटी रहेछ। यसैलाई हिरोइन बनाऊँ। मेरो छोरालाई पनि सुहाउने खालको छ यार।’
‘यो राजघरानाको छोरी हो, कहाँ फिल्म खेलाउँछन्, हुन्न,’ उनले भने। तर भुवन र अनमोल दुवैले कर गरेपछि रविले साम्राज्ञीको घरमा कुरा पुर्‍याएको बताउँछन्।
‘त्यतिखेर मैले परिवारलाई केही हुन्न, केही भए म जिम्मा लिन्छु भनेर सम्झाएकी थिएँ,’ उनले मंगलबार सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘यस्तै होला भनेर परिवार डराएको थियो। त्यही भयो।’
वर्कसपमा उपस्थित एक कलाकारका अनुसार, एकदिन हिरो र हिरोइन बीचको सिन देखाउन खोजिएको थियो। हिरोले हिरोइनको हात समातेर तान्ने एउटा सिन अनमोल र साम्राज्ञीले गरे। त्यसपछि भूवनले ‘तैंले यसरी कमेडी सिन गर्न सक्छस्’ भन्दै आए। उनले सक्छु भनिन्।
‘ल मसँग गर न त,’ भुवनले भने। त्यतिबेला साम्राज्ञीको हात समातेर उनले निकै असहजपारामा आफूतिर ताने। साम्राज्ञीले प्रतिवाद गरेकी थिइन्।
‘तपाईंले सिन गर्न किन आउनुपर्‍यो’ भन्दै रिसाएर भुवनलाई धकेलिन् र रिसाउँदै अर्कैतिर गइन्। भुवन ‘हाहाहा’ गर्दै बसे।
ड्रिम्स फिल्मको पहिलो चरण सुटिङका लागि २०७२ साल वैशाख १ गते उनीहरू काठमाडौंबाट जोमसोमका लागि हिँडेका थिए। वर्कसपकै बेला भुवनका असहज लाग्ने ‘जोक्स’ र व्यवहार देखेकी साम्राज्ञीले सुटिङ गर्न जाँदा आफ्नी स्कुले साथी प्रनिका भण्डारीलाई साथ लगेकी थिइन्।
‘हामीले सल्लाह गरेका थियौं कि कसैले कतै बोलाए सँगै जाने भनेर। उसलाई बोलाए म जान्थेँ, मलाई बोलाए ऊ आउँथी,’ प्रनिकाले भनिन्।
उनले चिच्याएर ‘मामा मामा’ भन्दै रवि बस्नेतलाई बोलाइन्। रवि साम्राज्ञीका मामा पर्छन्। अर्को कोठामा रहेका रविले साम्राज्ञी चिच्याएको सुने। टिमका अरू सबैलाई उठाए। त्यतिबेला अनमोल केसी पनि उठेर आएका थिए।
‘ओइ, तेरो कोठामा हिजो राती को आएछ? रेप गर्न आएको त होला नि, हाहाहा,’ उनले त्यति बेला भुवनले भनेको सम्झिइन्। यति भनेर उनी गाडीमा चढेर कतै गए।
‘भुवनले साम्राज्ञीलाई ‘को आएको, रेप गर्न त होला नि’ भने र गए,’ उनले सम्झिए,’मलाई निकै अप्ठेरो लाग्यो।’
‘त्यो रात प्रहरी पनि आएको थियो। मलाई त सबले प्रहरीलाई रिपोर्ट गरेका छौं, को रहेछ पत्ता लाग्छ भनिएको थियो,’ साम्राज्ञीले भनिन्,’धेरैपछि थाहा पाएँ प्रहरीलाई रिपोर्ट नै गरेको रहेनछ।’
‘केटासँग भन्दा केटीसँग बढी फिजिकल हुने उनको बानी छ,’ भुवनसँग काम गरेका एक फिल्मकर्मीले बताए।
‘कस्तो कस्तो जोक्सहरू भन्नुहुन्थ्यो, सेक्सुअल एक्सपिरियन्स पनि भन्ने। मलाई त्यत्रो ठूलो मानिसले त्यस्ता कुरा र जोक्स भनेको सुन्ने बानी थिएन। मलाई असहज भयो तर अरू चुप थिए। मैले तत्काल त आफूलाई असहज लागेको छ है भन्ने खालको संकेत दिएकी थिएँ। यसरी बाहिर आएर पनि बोल्न सकिनँ,’ साम्राज्ञीले त्यो बेलाको क्षण सम्झिँदै भनिन्, ‘म नयाँ थिएँ, सानै पनि थिएँ। कस्तो बेला कसलाई कहाँ के भन्न हुने हो, के नहुने थाहै भएन।’
‘मैले दुई वर्षअघि एउटा अन्तर्वार्तामा यी कुरा बताउन खोज्दा मात्र पनि त्यहाँ सबैले यति ठूला आँखा बनाए। अनि म हच्किएँ,’ उनले भने, ‘मलाई यत्ति कुरा भन्न पनि समय लाग्यो। अहिले मात्र भन्न सकेँ।’
‘मैले आफ्ना कुरा राखेँ। त्यसपछि उहाँले पनि मलाई नानाथरी भन्नुभयो। मुद्दै हाल्नुभयो। मसँगको रिसिइबीमा अहिले आमालाई पनि तानिएको छ। मलाई यसले पनि निकै चोट पुर्‍याएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले थपिन्,’आफैले खोजेर फिल्मक्षेत्रमा ल्याएकी हिरोइन हो यसैले मलाई एक्सपोज गर्ने? भनेर उहाँलाई रिस उठ्या होला तर म उहाँले जे गरेपनि सहेर त बस्ने कुरा हुन्न।
‘अब केही सिप नलागेर मलाई तानिएको छ। हामी डटेर मुद्दा लड्छौं। मेरी छोरीलाई मेरो मात्र होइन, परिवारको साथ छ,’ नेहाले भनिन्, ‘यो साम्राज्ञीको मात्र कुरा होइन। हाम्रा छोरीहरू काम गर्न जाने ठाउँमा उनीहरूले सहज वातावरण पाउनुपर्छ।’
साम्राज्ञीले दुर्व्यवहारबारे बोलेपछि उनका धेरै फ्यानहरूले आफूलाई पनि ‘हामी साथमा छौं’ भनेर मेसेज पठाएको नेहाले बताइन्।
‘त्यसपछिका दिनमा कम्तिमा पनि ३ सय मेसेज आउँथे। साम्राज्ञीको साथमा हामी छौं भन्दै। यिनै मेसेज देखेर उसलाई बल मिलेको छ। हामीलाई शक्ति मिलेको छ,’ नेहाले भनिन्।
‘मलाई त्यतिबेलै भित्रबाटै घिन लागेको थियो, तर हाँसेरै बोलिदिएँ। मेरो परिवारलाई फिल्म क्षेत्रको विषय केही ज्ञान छैन। मैले पनि त्यतिबेला यो कुरा नजरअन्दाज गरेँ। तर आखिरमा सबैको असली रूप बाहिर आएको छ,’ उनले भिडियोमा भनेकी थिइन्।
साम्राज्ञीको पहिलो फिल्म ‘ड्रिम्स’ व्यावसायिक रूपमा सफल भयो। यसबाट चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहन मिले पनि सँगसँगै खुट्टा तान्ने मान्छेको सामना गर्नुपरेको उनले बताएकी छन्।
‘हरेक फिल्मको प्रचारप्रसारमा जाँदा मलाई तपाईं किन घमन्डी हुनुहुन्छ भनेर सोधिन्थ्यो। मलाई भेट्दै नभेटेको, चिन्दै नचिनेको मान्छेले पनि म घमन्डी छु भनेर धारणा बनाइसकेका थिए। यसले मलाई दिक्क बनाउथ्यो। अन्तिममा थाहा पाएँ, जोसँग काम गर्दै आएकी थिएँ, उनीहरूले नै मेरोबारे अफवाह फैलाएका रहेछन्,’ उनले भनेकी थिइन्।
साम्राज्ञीको भिडिओ भाइरल भएलगत्तै भुवन केसीले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोइकराइ गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छन्? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने। सामाजिक सञ्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नि!’
‘उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गरेको भए मैले यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो। यो हुनुको कारण उहाँ आफैं हो। यो विषयमा कति जनाले बोल्नुभयो होला, तर कसैले नसुनेको पनि हुनसक्छ। उनी त पहिलो व्यक्ति हुन्, त्यसपछि मलाई कति जनाले के गरेको छ, तर म चुप लागेर बसिरहेको छु,’ साम्राज्ञीको भनाइ थियो।
‘जसलाई परेको हो उसले आफूलाई सहज लागेको बेला भन्ने अधिकार छ र त्यसमाथि कसैले पहिला किन नभनेको?’ भनेर प्रश्न गर्नु उचित नहुने स्वेताको भनाइ थियो।
नवलपुर र पर्वतमा थपिए २१ संक्रमित, गण्डकीमा संक्रमितको कुल संख्या २४७ पुग्यो
सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा भारत सहित चार देश निर्वाचित
भारतबाट नेपाल आएका तीन जनामा आरडिटी पोजेटिभ देखियो